Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 18/02/2020)
Kana uri kuronga kuona nyika dzakawanda paakanga achifamba nechitima mu Europe kungava kuchenjera kufunga bhizimisi ari Interrail Pass, kana chii vasiri EU vagari kudana Eurail. An Interrail Pass achaita yenyu chitima kufamba nyore. zvisinei, kana iwe uri munhu tighter bhajeti, munhu matikiti angashanda kunze isingadhuri (kunyanya kana uri kazhinji parwendo nechokumabvazuva Jerimani). Funga bhajeti yenyu uye kuita tsvakurudzo usati bhuku rako njanji zvichipfuura. Our website saveatrain.com ndiyo nzvimbo akakwana kutanga kubatsira kuronga rwendo rwako muEurope.
Most trains have either a restaurant, Datenroku ngoro kana tudyo zvingoro vanouya nokutengesa sandwiches, zvinwiwa uye zvakawanda. Asi kana iwe uri munhu zvakasimba anofambira bhajeti kana une chaiyo Mishonga zvinodiwa, kuchenjera kuunza mamwe nezvikafu zvishoma nemi parwendo rwenyu.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)